Big City Small World (Series2Episode2- Hello Carlos!) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on November 30, 2012 at 10:44 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series2Episode2- Hello Carlos! ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
Series2Episode2- Hello Carlos! (အတွဲ (၂) အပိုင်း (၂) – မင်္ဂလာပါ Carlos!)
Carlos, the aspiring chef, shows up out of the blue - but he might help save the cafe.
ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသည့် စားဖိုမှုးဖြစ်သည့် Carlos သည် ဗြုန်းစားကြီး ရောက်လာသည် – သို့သော် သူသည် ကော်ဖီဆိုင်ကို ကယ်တင်ကောင်း ကယ်တင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဒုက္ခပါပဲ၊ ဒါဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကို ငါတော့ နားမလည်နိုင်တော့ဘူး!
ဟိုင်းပါ Olivia! ဘာပြဿနာဖြစ်နေတာလဲ?
ဒါက ဒီမှာတင်မဟုတ်ဘူး၊ ကော်ဖီဆိုင်တင်မကဘူး...
သူတို့က ငါ့ဆိုင်ကိုလဲ ဖြိုချချင်နေတာ၊ ကော်ဖီဆိုင်လိုပဲပေါ့ါ!
ဖြိုချမယ်? လုံးဝ ဖျက်ဆီးမှာပေါ့?
ကျေးဇူးပြု၍ စားစရာ တစ်ခုခုလောက်ရနိုင်မလားခင်ဗျာ ပြီးတော့ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်လောက်?
ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာ စားစရာစာရင်းပါ၊ တစ်နေရာရာမှာ ထိုင်လိုက်ပါ...
ဒုက္ခပါပဲ...သွားထိုင်ကြရအောင် – ဟိုမှာ Harry ရှိတယ်။ သူနဲ့သွားထိုင်ရအောင်
မင်္ဂလာပါ။ Magda လာနေပြီ။ ငါတို့ အစီအစဉ် တစ်ခုခုလုပ်မှနဲ့တူတယ်...
ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ငါတို့ဘာလုပ်နိုင်လဲ?
ဟေး Magda! ဟိုင်း! ငါတို့ဒီမှာ! လာထိုင်လေ!
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ! ဘာဖြစ်နေကြတာလဲ? ဘာလို့ အားလုံး ၀မ်းနည်းတဲ့ပုံပေါက်နေတာလဲ?
...ပြီးတော့ Olivia ရဲ့ဆိုင်ရောပဲ!
ဘာကြောင့်လဲ? အို – မြေယာကုမ္ပဏီ… သူတို့က တိုက်ခန်းအသစ်တွေ ဆောက်နေတာ… ငါမှတ်မိပြီ…
ဟုတ်တယ် – ပြီးတော့ သူတို့က ဒီနေရာကို ဖြိုချချင်နေတာ ပြီးတော့ ဘေးက Olivia ရဲ့ ဆိုင်ကိုရောပဲ
သူတို့က ငါတို့ကို နစ်နာကြေးတော့ပေးတယ်...
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါက မလုံလောက်ဘူး၊ ငါ့ဆိုင်ကိုပဲ ငါဆက်ထိန်းထားချင်တာ...
ဟုတ်တယ်။ ပြီးတော့ ငါလည်း ဒီကော်ဖီဆိုင်ကို ဆက်ဖွင့်စေချင်တယ်…ငါတို့အားလုံးဆုံနိုင်ဖို့အတွက် တစ်ခြားနေရာမရှိဘူး
မဟုတ်ပါဘူး၊ တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နားထောင်နေတာမဟုတ်ပါဘူုး။ ခင်ဗျားတို့ပြောတာကိုပဲ ဒီအတိုင်းကြားနေတာပါ
ဒီကို ရောက်တာ ပထမဆုံးအကြိမ်လား?
Harry: It’ll probably be the last..
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိပါတယ်... ကျွန်တော်ပြောချင်တာလဲ အဲ့ဒါပဲ...
ကျွန်တော်က အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်၊ အဆောက်အဦးကုမ္ပဏီလေ
ငါ့ဆိုင်ကို ဖျက်ချင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီလး?
ပြီးတော့ ငါတို့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး ကော်ဖီဆိုင်ရောပဲလေ?
ရှင်က ကုမ္ပဏီမှာ ဘာလုပ်တာလဲ?
အင်း၊ အဲ့ဒါက ပြဿနာပဲလေ၊ ကျွန်တော်က ထိပ်တန်းမန်နေဂျာမဟုတ်ဘူး
ကျွန်တော်က အစားအစာ စီစဉ်တဲ့သူပါ
ခဏနေပါဦး၊ ငါနားမလည်လို့... ခင်ဗျားက အစားအစာစီစဉ်ပေးတဲ့သူ... ခင်ဗျားက အစားအသောက်တွေလုပ်တယ်...
ဟုတ်ကဲ့ မှန်ပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော်က စားဖိုမှုးပါ။.ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တာ ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာလေ...
ဒါပေမယ့် အခုပဲခင်ဗျား ဒီကိုလာပြီး အစားအသောက် လာစားတယ်လေ...
အင်း ဟုတ်တယ်... ဒီလိုလေ၊ ပြဿနာက ကျွန်တော် တစ်ခြားသူတွေအတွက် ချက်ပေးတဲ့ အစားအစာတွေကို တစ်ကယ်တမ်းကျတော့ ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ ကျွန်တော်က အသစ်အဆန်းကို စမ်းသပ်ကြည့်ချင်တာ – ဒါကြောင့် ဒီကိုလာတာ!
ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ သိပ်တော့ မသေချာဘူး… ကျွန်တော့အလုပ်လဲ မဆုံးရှုံးချင်ဘူးလေ…
ဟင့်အင်း ကျွန်မလည်းမထင်ပါဘူး - ဒါပေမယ့် ရှင်က အဆောက်အဦးကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်တာဆိုရင် ကျွန်မတို့အတွက် သုတေသနလုပ်ပေးနိုင်တာပေါ့...
သုတေသန! ဘာကို ဆိုလိုချင်တာလဲ?
အာ...အင်း ကောင်းပြီလေ၊ ပြောချင်တာက တတ်နိုင်ရင်... ခင်ဗျားတို့ကို ကူညီချင်ပါတယ်!
ကောင်းတာပေါ့၊ ကျွန်မတို့ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ ကြည့်ကြရအောင်။ ဒီနေရာကို ကျွန်မတို့ ကယ်နိုင်မှာပါ!
Permalink Reply by AYOOB AKHOON on November 30, 2012 at 15:30
Permalink Reply by Thike Htun on November 30, 2012 at 19:24
Permalink Reply by UMyo Min on November 30, 2012 at 20:13
Permalink Reply by padout,layy on December 1, 2012 at 10:14
Permalink Reply by pann su cho on December 1, 2012 at 16:05
thank you for listening program .
Permalink Reply by Soe Soe on December 5, 2012 at 16:42
thanks alot for sharing scripts.
Permalink Reply by Sulay Yee on December 5, 2012 at 18:39
Permalink Reply by thet naing tun on January 28, 2013 at 15:21
i don't know how to thak you. i cann't to tell to you how greatful i'm